Inona no tanjon'ny SEO amin'ny orinasa iray miasa amin'ny orinasa madinika?
Androany, hijery ny SEO ho tetika ara-barotra manokana ho an'ny orinasa madinika. Hizara ny zava-drehetra nianarako niaraka tamin'ny tetikasa SEO aho. Ny tanjoko dia ny hanohana anao amin'ny fahalalana mba handraisana fanapahan-kevitra tsara amin'ny fampiharana tetikady SEO. Noho izany, akaiky kokoa ny teboka.
Mifantoka amin'izay tena eritreretina
Ny marina dia ny SEO amin'ny orinasa madinika dia tsy sarotra tahaka ny mety amin'ny voalohany - unique apple watch accessories. Azonao atao tsara ny manatsara ny lalao Google ary manintona mpitsidika bebe kokoa amin'ny tranonkalanao amin'ny fifantohana amin'ny zavatra efatra fototra - mamorona votoaty manan-danja, mifidy ny teny fanalahidy mety, manao fanamafisana eo amin'ny tranokala ary manangana backlinks. Andeha hojerentsika akaiky ny tsirairay amin'ireo SEO ireo.
Fanamboarana singa efatra ho an'ny orinasam-pandraharahana madinika SEO:
Ity iray ity dia fanombohana ny sehatra SEO. Ny tanjonao dia tokony hifidy fehezanteny manan-danja amin'ny raharaham-barotrao. Eritrereto ireo teny ireo izay miditra ao anaty boaty fikarohana rehefa manao fikarohana. Miezaha mifidy ny teny fanalahidy izay tsy mifanentana loatra amin'ny teti-bola. Ny safidy tsara indrindra dia ny mametra ny tenanao eo amin'ny manodidina ny dimy vao manomboka. Raha manao izany ianao, dia misy ny fotoana mety kokoa hahitanao vokatra tsara amin'ny tetibola kely.
Ny famoronana votoatiny
Raha vantany vao vita amin'ny teny fanalahidy ianao, dia mamorona pejy manokana momba ny votoatin'ny tsirairay. Tadidio fa ny votoaty azonao dia tokony hanome izay ilain'ny mpihaino anao. Miezaha mamorona kokoa ny votoatinao toy izay efa ao amin'ny pejy voalohany amin'ny teny fanalahidy nofidiana.
Fanamafisana eo amin'ny toeram-piasana
Ny dingana manaraka dia ny manampy ny teny fototra ho an'ny pejy tsirairay amin'ny URL, ny meta, ny lohatenin'ny pejy, ary ny lohateny lehibe. Ny fampidirana ireo teny fanalahidy any amin'ireny toerana ireny no zavatra manan-danja indrindra tokony hatao satria izy no manana fiantraikany manan-danja eo amin'ny toerana misy anao.
Fananganana Backlinks momba ny kalitao
Ny hiteraka ny votoaty sarobidy ary ny fanatsarana azy tsara dia ny antsasaky ny ady. Ny antsasany hafa dia mikasika ny isa feno backlinks ny tranokalanao. Raha te hahazo toerana ambony ao amin'ny Google Search, ny tranokalanao dia mila manana rindran-damina mivaingana kokoa sy tsara kokoa noho ireo loharanon-kevitra izay misoratra ao amin'ny pejy voalohany amin'io teny fototra io.
Ny fanamboarana ny rindran-kiady izay efa misy ny pejy Google voalohany dia toerana tena tsara hanombohana. Fantaro ny loharano mifandray amin'izy ireo ary anontanio raha hampifandraisina amin'ny tranokalanao koa izy ireo. Hevitra tsara iray hafa koa ny mangataka amin'ireo mpiara-miasa, mpanjifa na namana mba hifandray amin'ny tranokalanao. Izany dia afaka manampy anao hanorina fifandraisana amin'ireo orinasa tsara laza sy ireo mpitoraka bilaogy malaza izay manana tranonkala mifandraika amin'ny anao.
Tokony hahatakatra ianao fa mitady fotoana i SEO. Google dia mety tsy manonitra ireo backlinks azonao mandritra ny herinandro. Na izany aza, na ho ela na ho haingana dia hihatsara ny lalao, ary hahazo mpitsidika bebe kokoa amin'ny tranonkalan'ny orinasa ianao.